Pressfarm: Mitadiava mpanao gazety hanoratra momba ny fanombohanao | Martech Zone
Pressfarm: Mitadiava mpanao gazety hanoratra momba ny fanombohana anao
Talata, Jolay 15, 2014 Douglas Karr
Indraindray isika dia manana fidiram-bola mialoha, mialoha ny fampiasam-bola izay mangataka fanampiana ara-barotra aminay ary tsy misy na inona na inona azontsika atao satria tsy manana teti-bola izy ireo. Matetika izahay manome azy ireo torohevitra vitsivitsy izay misy ny fanentanana ny varotra am-bava (aka referrals) na haka izay vola kely ananan'izy ireo ary hahazo orinasam-pifandraisana lehibe. Satria ny votoatiny sy ny marketing anatiny dia mitaky fikarohana, drafitra, fanandramana ary fanamafisana - mitaky fotoana be loatra izany ary mitaky loharano maro ho an'ny fanombohana.
Nanoratra teo aloha izahay ahoana ny fampiakarana ary ahoana no tsy hampisondrotra bilaogera na mpanao gazety. Ny fanoratana lahatsoratra mifandraika sy azo faritana amin'ny mpanao gazety dia fomba tsara hanandramana hahitana ny fanombohanao. Ny olona sasany mino fa SPAM tsotra izao fa tsia. Amin'ny maha mpitoraka bilaogy teknolojia marketing ahy dia antenaiko ny hitia sy hitia ary hampiasana kianja saika isan'andro mba hahitana vokatra sy serivisy vaovao hanoratany ato amin'ity bilaogy ity. Ny lakile dia ny fomba nanamboarana ny pitch na raha misy ifandraisany amin'ny mpihaino ahy izany.
Pressfarm dia tranonkala fanombohana vaovao izay nanangona ny kaonty mailaka sy twitter an'ny mpanao gazety manerana ny Internet izay manoratra momba ny fanombohana. Ny tsara indrindra dia tsy famandrihana lafo io. Vola vitsy monja izao hahazoana ny lisitr'ireo mpanao gazety iray manontolo.
Ny toro-hevitra omeko amin'ny fanombohana - manamboara hafatra manokana ho an'ny boky sy gazety tsirairay tianao ho tonga. Aza hadino ny milaza azy ary amin'ny farany, aza manitatra fa ianao no zavatra lehibe manaraka, mandefasa pikantsary rohy mankany amin'ny horonan-tsary ho hitan'izy ireo… ary avy eo miandry. Azafady, aza adino hatrany ny manoratra azy ireo… manelingelina fotsiny izany. Raha te hanoratra momba anao izy ireo dia sambany nifandray taminao izy ireo.
Tags: bilaogera biopitch pitchmahita bilaogera ao amin'ny twittermahita mpanao gazety ao amin'ny twittermpanao gazety biofetin'ny mpanao gazetyditypressfarmstartupmpanao gazety fanombohanamarketing marketingfanontana fanombohana
Ny fanambin'ny silos amin'ny marketing ary ny fomba hanapahana azy ireo